The Sungano Itsva — Trip LEE
The Sungano Itsva
Heunoi ichangopfuura mharidzo Ndaiparidza Jeremiya 31:33. My huru dzaiva:
ini. Mwari Ari Kushanda pose
II. Mwari Ari Kushanda nechomukati
III. Mwari Ari Kushanda Interpersonally
IV. Mwari Ndiye At Work
Mstoniajohn • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:31 ndiri • pindura
Ndine #goodlifebook yangu uye ndiri anoruda. Mwari vakuropafadzei rwendo. Ndinoda kuona Jehovha achiita witrh hwako
Scott Larrison • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:31 ndiri • pindura
Maita zvenyu yokuitawo chokwadi shoko raMwari. shoko renyu akabata ichi mangwanani mwoyo wangu. Mwari akuropafadzei hama uye ndinovimba kukuonai mose OKC pamusoro 10/25.
Cdallenbach1212 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 9:31 ndiri • pindura
rambai muchiita Ur chinhu Ishe